June 4, 2021 - Khitalin Media
ယောင်္ကျားလေးတွေအပေါ်မှာ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစေမယ့် စိတ်ဝင်စားမှုကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖော်ပြခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးတွေက သမိုင်းမှာ ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းခံကြရတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုပရောပရည်အနုပညာက မွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ဆန်းပြားတဲ့ ကိုယ်ဟန်အမူအရာ၊ မျက်နှာအမူအရာနှင့် ထိတွေ့မှုတွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ အာရုံကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ချစ်စရာ coquetteက သူမရဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေထက် ကြီးမားတဲ့အားသာချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ စပယ်ရှယ်အကြည့် ကျွန်မတို့အဘွားတွေလိုမျိုး ဒီစပယ်ရှယ်အကြည့်တွေ ကြည့်ရှုတတ်ဖို့သင်ယူပါ။ ဒီလို ပရောပရည်လုပ်ခြင်းက အရေးကြီးတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက သူမကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကို ထုတ်ဖော်တဲ့နည်းလမ်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလုပ်ရမလဲ- သင်ချစ်မြတ်နိုးရတဲ့သူရဲ့ မျက်လုံးထဲကို သုံးစက္ကန့်ခန့်ကြာအောင် တစ်ဖြောင့်တည်းကြည့်ပါ(”ကြာ”ကြည့်တို့ ၊ ”ညို့”ကြည့်တို့ဆိုတာမျိုး”)။ ပြီးရင် အဝေးကိုဖြစ်ဖြစ် အောက်ဘက်ကိုဖြစ်ဖြစ် ပြန်ကြည့်ပါ။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာထပ်ခါတလဲလဲ အဲ့ဒီလိုလုပ်ပေးပါ။ ၂။ ထိတွေ့မှုတစ်ခု ကြည့်ရှုခြင်းအပြင် အနီးကပ်ထိတွေ့နိုင်တဲ့ ဆက်သွယ်မှုတွေကို တည်ဆောက်ဖို့ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ လက်ဖဝါး … Read more
၁။ အသွင်အပြင် ပုံသဏ္ဍာန်ဝေဖန်မှုများ အလှတရားဟာ တည်မြဲတဲ့ အရာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှ နုပျိုလှပနေပေမဲ့ အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ အနည်းနဲ့ အများ ပျက်စီးယိုယွင်းစမြဲပါ။ အသက်အရွယ် ကြီးလာတာကြောင့်သော်လည်ကောင်း၊ သွေးသားပြောင်းလဲမှုကြောင့်သော်လည်ကောင်း၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေရသော်လည်ကောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါက ယောက်ျား/ မိန်းမ အားလုံးပြောင်းလဲမှုရှိပါတယ်။ ဒီအချက်တွေပေါ်မှာ သင့်အနေနဲ့ ပြစ်တင်ဝေဖန်နေရင်တော့ သင်ဟာ အချစ်ထက် တဏှာရာဂကို ဦးစားပေးသူဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်အနေနဲ့ လက်မတွဲခင်အချိန်ထဲက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အားနည်းချက်တွေကို လက်ခံနားလည်ပေးရမယ်၊ ချစ်မြတ်နိုးတတ်ရပါမယ်။ ဒါ့အပြင်သူရဲ့ အားနည်းချက်ကို ဘယ်လိုကောင်းမွန်အောင်ပြန်တည်ဆောက်မလဲ၊ လိုအပ်ချက်တွေကို သင့်ဘက်က အလိုက်တသိ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ၂။ တစ်ယောက်ရဲ့ အမှားကို တစ်ယောက် ဖော်ကောင်လုပ်ခြင်း တစ်ယောက် မျက်ချေးကို တစ်ယောက်မမြင်ဘဲ အချင်းချင်း လက်ညိုးထိုးပြီး အမှားတွေကို … Read more
ဒီလို မိန်းကလေး မျိုးကို တစ်ဘ၀လုံးစာအတွက်လက်တွဲမိရင်တော့ တစ်သတ်လုံး ရင်တစ်ပူပူနဲ့ရှင်သန်သွားရမှာပဲ Bro တို့ရေ… မိန်းက လေးတွေများစွာက မတူညီတဲ့စရိုက်တစ်ခုစီနဲ့ မွေးဖွားလာခဲ့ကြတာမှန်ပင်မဲ့ စရိုက်ထက်စိတ်ထားတတ်တဲ့ သူမျိုးနဲ့ တွေ့ဖို့ကပိုလို့အ ရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလို ပြောလို့စရိုက်ခပ်ဆိုးဆိုးနဲ့မိန်းမ ကျ တော့ လက်ထပ်သင့်သလားလို့ မေးလာပါလိမ့်မယ်…ဒါက တော့ကိုယ်တွဲတဲ့မိန်းက လေးက ကိုယ့် အကြိုက်စရိုက်ဟုတ်မဟုတ် ဦးဆုံးရွေးရမှာ Bro တို့ တာဝန်ပါပဲ။ ဒါဆိုရင် အ ပေါ်မှာ ပြောတဲ့စိတ်ထားတတ်တဲ့သူမျိုးဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ? ဘယ်လိုစိတ်မျိုးမထားတတ်တဲ့မိန်းမ(သို့) ဘယ်လို မိန်းက လေးတွေကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်လုံးဝမ ရွေးချယ်သင့်ဘူးလဲ? … (၁) မရောင့်ရဲနိုင်တဲ့သူမျိုး လိုအပ်တာထက်လိုချင်တာ များနေတဲ့သူမျိုးပါ။ … Read more
ညဘက်အိပ်တဲ့အခါ သွားရည်ကျတတ်ရင် ညဘက်အိပ်တဲ့အခါ သွားရည်ကျတတ်တဲ့အကျင့်ကို ဘယ်လိုပြင်ယူမလဲ သွားရည်ကျတယ်ဆိုတာဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အာခံတွင်းထဲမှာ သွားရည်ပမာဏအမြာက်အမြားဖြစ်လာပြီး တခါတလေမှာ ပြုလုပ်တတ်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုမျိုးသွားရည်ကျတတ်တဲ့အကျင့်ဟာ ပုံမှန်နဲ့ အလွန်အကျွံဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ ရောဂါတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာ ပုံမမှန်တဲ့အခြေအနေမျိုး ဖြစ်နေပြီဆိုတာကို ပြသနေတဲ့ လက္ခဏာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီလိုမျိုးသွားရည်ကျရခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုအကြောင်းအရင်းတွေရှိနေမလဲ ရပ်တန့်အောင် ဘယ်လိုတွေလုပ်ဆောင်နိုင်လဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အခုပဲဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဘာကြောင့် သွားရည်ကျတာလဲ အိပ်စက်တဲ့အခါ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မျက်နှာကြွက်သားများဟာ အကုန်ပြေလျော့သွားပါတယ်။ သွားရည်ဆိုတာဟာ အိပ်နေတဲ့အချိန် ပါးစပ်ထဲမှာ စုပြုံလာတဲ့အတွက် အတန်ငယ်ဟနေတဲ့ ပါးစပ်နားမှနေပြီး အပြင်ဖက်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းစီးကျသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းအုံးတွေမှာ သွားရည်တွေပေကုန်ပြီး ဘယ်လိုမှသက်သောင့်သက်သာအိပ်စက်လို့မရအောင်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သွားရည်အလွန်အကျွံစီးကျခြင်းဟာ အာရုံကြောဆိုင်ရာ ရောဂါတစ်ခုခုရဲ့ လက္ခဏာဖြစ်နိုင်သလို နှာခေါင်းအတွင်းမှာ ပြည့်ကျပ်မှု၊ … Read more
ဖုန်းဆင်းကဒ်များဖြင့် အင်တာနက် အသုံးပြုနည်း Mobile Internet ပြန်ရနေပါပြီနော် …။ 1 Mpt သမားတွေအတွက် Internet ကို Psiphon/pro vpn နဲ့သုံးပါ …။ Location ကို US ကိုထားပြီး ချိတ်ပါ။ အချိန်နည်းနည်း ပေးစောင့်ရင် ရပါတယ်နော် …။ အခုကိုယ်တိုင် သုံးနေပါတယ် …။2Mytel နဲ့ Telenor သမားတွေအတွက် US Location ထားပါ …။ မရပါက….. VPN Psiphon/pro proxy setting ထဲမှာ 203.81.75.37 ထည့် server က singapore ပါ …။ port 8080 Address 203.81.75.37 🙂🙂🙂 … Read more
၁ ။ သင် က အ မှီ အ ခို ကင်း ပါ တယ် ။ ဘယ် သူ ကို မှ အား မ ကိုး တတ် ပါ ဘူး ။ ဖြစ် သ မျှ အ ခြေ အ နေ တိုင်း ကို တစ် ယောက် တည်း ထိန်း ချုပ် တတ် ပါ တယ် ။ ၂ ။ အ ရာ ရာ ကို အ လေး အ နက် ထား သူ တွေ ဖြစ် … Read more
ကုစားမရတဲ့ အကုသိုလ်မို့ မကျူးလွန်မိပါစေနဲ့
ကုစားမရတဲ့ အကုသိုလ်မို့ မကျူးလွန်မိပါစေနဲ့ မောင်အောင် ဘုရား… မင်း သက်ရှိဘုရားဆိုတာ သိရဲ့လားကွယ့်-? တပည့်တော် မသိပါဘူးဘုရား။ အိမ်း… လောကမှာ သက်ရှိဘုရားဆိုတာ ရှိတယ်ကွယ့်။ မင်းနားလည်အောင် ဘုန်းဘုန်းပြောပြမယ်နော်။ တင်ပါ့ဘုရား။ လူသားတိုင်းအတွက် သက်ရှိဘုရား တစ်ဆူရှိတယ် မောင်အောင်ရေ… တင်ပါဘုရား။ သက်ရှိဘုရားဆိုတာ… သားသမီးတိုင်းကို ဝမ်းနဲ့လွယ်မွေး နို့ချိုတိုက်ကျွေးခဲ့သည့်အမေနှင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သည်ဟု မညည်းမငြူဆူပဲ လုပ်ကျွေးပြုစုခဲ့သည့် အဖေသည် သက်ရှိဘုရား တစ်ဆူပဲကွယ့်။ တင်ပါဘုရား။ မိဘနှစ်ပါးက သားသမီးတို့အတွက် အမြဲတမ်း အဓိကထား ယုယခဲ့သလို၊သားသမီးတိုင်းကလည်းမိဘနှစ်ပါးကို သက်ရှိဘုရားတစ်ဆူလို ရိုသေ ကိုင်းရှိုင်းရမယ် ဆိုတာ မှတ်သားထားကွယ့်။ တင်ပါ့ မှတ်သားထားပါ့မယ် ဘုရား။ မိဘနှစ်ပါးက… သားသမီးတို့အတွက် ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘဝမှ စ၍ နေရေး ထိုင်ရေး၊ ဝတ်ရေး စားရေးမှ … Read more
မိုးနည်းလွန်းတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာ မိုးရွာသွန်းမယ့်ရက်များ
ကြာသပတေး သား/သမီးတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား
ကြာသပတေး သား/သမီးတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား ကြာသပတေး သားသမီးများသည် စိတ်ရင်စေတနာကောင်းပြီး ပွင့်လင်းဖြူစင်သောစိတ်ပိုင်ဆိုင်သူပါလူတိုင်းကိုခင်မင်တတ်သည်။ အကူအညီတောင်းခဲလျှင်လည်း မည်သူ့ကိုမဆို အကူအညီပေးရန်အသင့်ရှိနေတတ်သူဖြစ်သည်။ လူအများနှင့် စည်းစည်းလုံးလုံး၊ ညီညီညွတ်ညွတ်နေချင်စိတ်ရှိသူဖြစ်မည်။ မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းများအပေါ် အလွန်သံယောဇဉ်ကြီးတတ်များဖြစ်ကြသည်။ တည်တည်ကြည်ကြည်နေတတ်ပြီး စိတ်သဘောထားကောင်းမည်။ဖြစ်လေရာဘဝ၊ ရောက်ရာအခြေအနေတွင် ပျော်သလိုနေတတ်မည်။ စိတ်ဓာတ်ထက်မြက်ပြီး မတရားမှုကိုဆန်ကျင့်သူများဖြစ်သည်။ ပြောစရာရှိလျှင်ဗြောင်ပြောလွန်းသောကြောင့် လူများစုကတခါတလေ အမြင်ကပ်ကြသည်။ သင်သည်ခံစားချက်များကိုရင်ဖွင့်တတ်သော်လည်း လုပ်ရမည့်အလုပ်နှင့်ပတ်သက်လာလျှင်အလွန်လျို့ဝှက်တတ်မည်။ သင်ဘာလုပ်မည်ဆိုတာကိုမည်သူမျှ မသိနိုင်ပါ။ အလုပ်ကို အပင်ပန်းခံလုပ်နိုင်မည်၊ ကြိုးစားသည်။ကြိုးစားသလောက် အရာမထင်ဖြစ်တတ်သည့် ကံမျိုးကြုံရတတ်ပါသည်။ လူအများက ပေါ့သည်ပျင်းသည်ဟု ထင်နေကြသည်။ အလုပ်ကို ပြတ်ပြတ်သားသားမလုပ်ခြင်းကြောင့်လည်း ဒုက္ခကြုံရတတ်ပါသည်။ ဒုက္ခကြုံလျှင်ဖြစ်စေ၊ပျော်စရာကြုံသည်ဖြစ်စေ ကံကိုပုံချတတ်သောစိတ်မျိုးရှိသည်။ မနက်ဖြန်အတွက်ကိုတွေးပူနေတက်သူမဟုတ်ပါ။ လက်ထဲငွေရောက်လျှင်လည်း ဘာမှမည်မည်ရရမဟုတ်ဘဲ ကုန်နေတတ်မည်၊လက်ထဲငွေအနည်းငယ်ရှိနေလျှင် အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။ငွေထက်ပစ္စည်းကိုပိုစုဆောင်းတတ်မည်။ စကားပြောရာတွင် နူးညံ့သိမ်မွေ့မည်။ ကြည့်လိုက်လျှင် မပြောတတ်သလိုနဲ့ တကယ်တမ်းပြောလျှင် အကွက်ကျကျ ပြောတတ်ဆိုတတ်ကြသည်။ မှန်ရင်Shareလိုက်တော့ … Read more